Ukubheja kwiikhadi ezinithiweyo zokwenza iimpahla zeediliya | IBezzia
UMaria vazquez | 05/04/2021 18:00 | Ndinxiba ntoni, Imizila
Ngaba unezinto ekhaya ongazinxibanga amashumi eminyaka? Ixesha lifikile lokugqogqa ezi zinto ukunika abo banethuba ithuba cardigans ezinithiweyo ukuba sonke sinabo okanye ubuncinci kuthi sonke abakwiminyaka efunekayo.
Ukuba unayo, unethamsanqa! Unokwenza izitayile zeediliya mkhuba kwaye unike ubomi besibini kuloo ngubo. Ngaba awugcini izinto? Sukuba nexhala, awuyi kuba nangxaki ekufumaneni oyithandayo kwingqokelela yefashoni yangoku kuba, njengoko besibhengezile kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, zezinye zeendlela zeli xesha.
Ngomsebenzi ovulekileyo, iintyatyambo ezimfakamfele, ukushicilelwa okutshekiweyo okanye iintlobo ezahlukeneyo. Amakhadigididi aphefumlelweyo aphefumlelweyo Ziqhelekile ngeli xesha lonyaka. Kwaye njengesiqhelo, ungazifumana kwingqokelela yeefashoni ezinje ngeZara, iMango okanye iAsos.
Kwimibala engathathi hlangothi okanye i-pastel shades ethambileyo Bazakudlala indima enkulu kwizinxibo zeli xesha lasehlotyeni-ehlotyeni lowama-2021. Kwaye akuyi kuba yimfuneko ukuba nzima ukubadibanisa kwezi zinto. Ngapha koko, ukudibanisa nejean lolona khetho luthandwayo phakathi kwabafundi be-instagram.
Ijini kunye nekhati, awuyi kufuna ngaphezulu kule ntwasahlobo. Ukugqibezela ukujonga noMary Janes okanye izihlangu ezinesithende esisezantsi kwisitayile se-T-Bar kunye nebhasikithi yesandla, njengoko uLouisa Durrell ebeya kwenza, uya kufezekisa ukubonakala okuphefumlelweyo kweediliya okulungele ukusetyenziswa kwemihla ngemihla.
I-Cardigans ene-eights okanye i-openwork kwiithoni ezingathathi hlangothi zikulungele ukunxiba ngaphezulu kweelokhwe okanye iintloko ezinemibala yeentyatyambo. Kwaye ukuba ufuna isitayile esiphefumlelweyo samashumi asixhenxe, kuya kufuneka uye kuphela kwisiketi esincinci esincinci kunye nekhadibhodi ehambelana nayo, ngaba ungalinga?
Ukongeza ekuncedeni ukuba wenze ukubukeka kweediliya ngeli xesha lonyaka, ezi cardigans engenakhola kwaye ibotshelelwe ngaphambili Baya kuba luncedo kakhulu xa kufika ihlobo. Siqinisekile ukuba uya kufumana okuninzi kubo kunokuba ucinga. Ngaba ujoyina umkhwa?
Imifanekiso - @iqosweb, @yeyo_ye, @lukhanyiso, @kwenzee, @iamfanlalisa, zekiswam, @lungelos, @iqosweb, @iamfanlalisa
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » fashion » Ndinxiba ntoni » Ukubheja kwiikhadi ezinithiweyo zokwenza iimpahla zeediliya
Ubisi lweMacadamia nut, izibonelelo kunye nendlela yokulungiselela